सन्दीपको खेलको चर्चासंगै परिवार दंग, आमा बुवा के भन्छन् ? | suryakhabar.com
Home खेलकुद सन्दीपको खेलको चर्चासंगै परिवार दंग, आमा बुवा के भन्छन् ?
सन्दीपको खेलको चर्चासंगै परिवार दंग, आमा बुवा के भन्छन् ?
on: ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ११:२५ In: खेलकुदTags: आमा बुवा के भन्छन् ?, सन्दीपको खेलको चर्चासंगै परिवार दंगNo Comments
लामिछाने परिवारले सन्दीपले यति छोटो समयमा यति ठूलो प्रगति गर्न सक्छ भन्ने सोचेको पनि थिएन । लामिछानेले आइपीएलमा गरेको उत्कृृष्ट प्रदर्शनले तीन करोडभन्दा बढी नेपाली, सारा विश्वभरका क्रिकेटप्रेमीका बीचमा सन्दीपले देश चिनाएकोमा आफूलाई गर्व लागेको उनले बताए।
आफ्नो चाहना इञ्जिनियर बनाउने भएपनि छोराको क्रिकेटमोह देखेर खुल्ला छोडेको बताउँदै उनले भने “अहिले त्यही स्वतन्त्रताले मेरो छाती फुलेको छ ।” सन्दीपले आइपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि सन्दीपका बारेमा सोधीखोजी गर्दै घरसम्म आउनेको संख्या बढ्दै गएको उनले भने । आइपीएलमा दिल्ली डेयरडेभिल्सले २० लाख भारुमा सन्दीपलाई टिममा अनुबन्ध गरेको हो ।
अन्तिम खेल खेल्नुअघि आइतबार बिहान ११ बजेतिर सन्दीपले बुबासँग कुरा गर्नुभएको थियो । “आज म्याच छ भन्यो, हालखबर सोध्यो अरु खासै कुरा भएन,” बुबा चन्द्रनारायणले भने । सन्दीप आगामी मे ३१ मा लर्डसमा हुने विश्व ११ का तर्फबाट खेल्नेछन् । वेष्ट इण्डिजविरुद्ध हुने खेलमा उनले विश्व चर्चित खेलाडीसँग खेल्न पाउनेछन् । नेपाल आएर बेलायत जाने तयारी रहेको सन्दीपको परिवारले जनाएको छ ।
Tags: आमा बुवा के भन्छन् ?सन्दीपको खेलको चर्चासंगै परिवार दंग
कतारको कमाईले ऋणको बोझ त घट्यो तर सन्तान जन्माउने प्रयास असफल हुँदा तनाव
८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ११:२५